Juunyo 10, 2019 6:40 g 1
Radio Daljir oo xoogga saaraya, siina xoojin doona soo gudbinta wararka iyo waraysiyada iftiimaya xaaladihii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida, waxa uu Isniin walba idiin soo gudbin doonaa warar joogta ah oo ka warrama xaaladihii ugu danbeeyey ee deegaanka, dhan siyaasad iyo dhan dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee deegaanka.
1) 5 Juun 2019
Wararka naga soo gaaraya galbeedka gobolka Sitti ayaa sheegaya in maleeyshiyaad hubaysan oo ka soojeeda qowmiyada Canfarta ay ka soo gudbeen xadka u dhexeeya Dowlad Deegaanka iyo Ismaamulka Canfarta, kaddibna ay weerar la beegsadeen degmada Cadayti oo ka tirsan gobolka Sitti ee isla Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Weerarka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof, dhaawacuna yahay saddex. Dadka la dilay ayaa la sheegay in magacyadoodu kala yihiin Buuh Cali iyo Cismaan Cilmi Cataaye.
2) 7 Juun 2019
Isla malleeyshiyaadka Canfarta ayaa mar kale weeraray tuulo hoostimaada degmada Cadayti ee gobolka Sitti, waxaana weerarkaas ku dhawaacmay laba qof. Dadka dhawaacmay ayaa kala ahaa Cabdullaahi Waceeys iyo Bilaal Maxamuud Raage.
3) isla 7 Juun 2019
Waxaa weli socda bannaanbaxyada gobolka Doollo, kuwii ugu danbeeyeyna waxa ay ka dheceen degmada Wafdhuug oo ka tirsan isla gobolka Doollo.
Boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay xaafado ka tirsan degmada Wafdhuug kuwaas oo eedeymo u jeedinayay Madaxweynaha DDS, Mustafa Cagjar, waxa ayna muujinayeen diidmo Guddoomiyaha Cusub ee loo magacaabay gobolka Doollo.
Dhanka xiriirka qabaa’ilada gobolka, bishii Janaayo 2019 illaa iyo maantadan waxaa taagan xiisado salka ku haya aanooyin qabaa’ilada wada dega gobolka Doollo. Bilihii ugu dambeeyay waxaa soo cusboonaaday dagaalo beeledyo, waxa ayna dhowr mar ka qarxeen gobolka. Deeganada ugu daran ayaa kala ah magaalada Wardheer iyo degmooyinka Gallaadi, Lahelow, Yucub, Daratoole iyo waliba Danood.
4) 8 Juun 2019
Dhanka shilalka gaadiidka, shil gaari ayaa siddeedii bisha waxa uu ka dhacay degmada Sheeygosh ee gobolka Qorraxay, waxa uuna dhaawac soo gaaray illaa todobo qof.
SAHANKA DALJIR: Safarkii Bossaso & Badhan
Dagaa ladan wa kuwo la aburayo.somalida iyo qowmiyadaha kale ka dhexeya hada. Ujeedada laga leyaha waa ?. Halka mid een hubaa waa in itobiya lug kuledaha waxa dhacaya. Lakin wali qor shahan uu socon layaha. Had ba dhinac lagasoo warejinayo.